China ICE High arụmọrụ Sand Filtration System for Cowing Towers 'Circulation Water Treatment Manufacturer and Supplier | Yubing
High arụmọrụ Sand Myọcha
Mmepe nke elu arụmọrụ aja nzacha agbanwewo jụrụ mmiri filtration. Akwụsịla solids nwere ike ugbu a na-eri ihe n'ụzọ dị irè wepụrụ 1/2 micron na akpaka backwashing iyo. Older technology multimedia nzacha naanị gbadaa ihe 10 microns. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmiri mmiri dị na 1/2 ka 5 micron size, nnukwu arụmọrụ nzacha dị mma karịa iwepu nsogbu ndị a na-eweta nsogbu. Ntinye arụmọrụ dị mma pụtara nsonaazụ dị mma site na obere nzacha. ICE elu arụmọrụ nzacha na-eji ultrafine ájá iji nye a dị nnọọ irè karị filtration. Omume a na - eme n’elu mmiri nke igwe mgbasa ozi mara mma na - egbochi ịkwụnye ngwangwa site na ịkwanye ihe mmetọ n’elu mpaghara nchekwa. Ọbụghị naanị na nzachapụ arụmọrụ na-akawanye mma nke ukwuu, mana ihe nzacha achọrọ ruo ugboro 10 obere mmiri ịsacha.
Ọnụ na-akwụ ụgwọ dị irè
ICE elu arụmọrụ nzacha bụ ihe ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na wepụ nnọọ mma ahụ na jụrụ ụlọ elu sipu ikuku. Ọdịmma a dị mma nke ukwuu na-enye ohere ka nzacha ndị a dị okpukpu anọ ruo ugboro ise karịa ihe nzacha multimedia ma na-enye nnukwu mmiri dị ọcha. Multimedia na -aza akụkụ-iyi 5 ka 10% nke recirculation ọnụego, mgbe elu arụmọrụ nzacha naanị mkpa 1 ka 3%. Ekwela ego na nnukwu ihe nzacha na-eji nkà na ụzụ ochie.
Uru nke mmiri a kpochara
•Ebe nhicha na-ekpo ọkụ dị ọcha na-enyere akụrụngwa aka ịrụ ọrụ nke ọma na-akpata mbelata ikike ume.
•A na-agbatị ndụ akụrụngwa n'ihi mbelata ọnụego corrosion.
•Mmetụta nke ọgwụgwọ microbial ka mma na-arụ ọrụ ahụike.
•Akụrụngwa akụrụngwa na oge anaghị edozi oge belatara n'ihi nchikota nhicha, jupụta na ndị na-ekpo ọkụ ọkụ.
Osote: Ice ulo oru osmosis usoro nke jụrụ igwe mmiri sistem
jụrụ ụlọ elu mmiri filtration
jụrụ ụlọ elu mmiri filtration usoro
filtration nke jụrụ ụlọ elu mgbasa mgbasa
usoro nzacha mmepụta ihe
ulo oru ájá filtration usoro
ájá filtration maka jụrụ ụlọ elu
ájá filtration usoro